နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: New Myanmar Passport
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:54 PM
Rita August 22, 2010 at 12:34 AM
web cam နဲ့ ရိုက်တာတော့ ဆိုးချက်
တခါတခါကျ အိုင်ဒီယာတွေ လိုက်ကို မမီဘူး
သိန်း ၃၆၀ တန်ဖုန်းအကြောင်း ကြွားထားတာ... ဒါမျိုးကျ ရုံးကို ဘယ်လိုပြောရပါ့
PhyoPhyo August 22, 2010 at 5:21 AM
PJ က ပီတော့ သိဘူး၊ ဂျေ ကတော့ Job နဲ့ တဲ့၊ မေးလိုက်တော့ သံရုံးကပြောပြတာ၊ တို့ ပတ်စ်ပို့လုပ်တာ ပြောရရင် တော်တော်မကောင်းဘူးဖြစ်တော့မယ်၊ တိုးတိုးတိတ်တိတ်မေးရင်တော့ ပြောပြမယ် :D
ကိုပေါ August 22, 2010 at 6:37 AM
ကိုဘွိုင်းဇ်.... ဘာလို့ ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ်အိုးမဲသုတ်ရသလဲ။ ဝက်ဘ်ကင်မ်နဲ့ ရိုက်ရင် ဘယ်လို ပုံလဲဆိုတာ စာဖတ်သူ သိရအောင် အသစ်ပြန်တင်ပေးပါ။
:P August 22, 2010 at 10:22 AM
P ဆိုတာ paw များလား... :P
TZA August 22, 2010 at 12:31 PM
ကိုပေါ.. ဒီတိုင်းပိုကြည့်ကောင်းတယ်ဗျ၊ မပြင်ခိုင်းပါနဲ့ :p
khet myint myint August 22, 2010 at 12:32 PM
လူချောလေးတစ်ယောက်ပဲ ... ခွိခွိ ။
ဒါ့ပုံ အံကြိတ်ပြီး အရိုက်ခံသလား ၊ ခေါင်းစောင်းပြီးကြည့်လိုက်တာ မာန်တင်းပြီး အံကြိတ်ထားသလိုပဲ ။
AMK August 22, 2010 at 8:46 PM
ဟို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ page နဲ့chip ထည့် တာပဲ ပြောင်းတာပေါ့နော် ရှေ့ စာမျက် နာ နှင့်အနီရောင် ကတော့ အတူတူပဲနော်
အတ္တ August 23, 2010 at 11:30 AM
ငစနေ August 24, 2010 at 12:46 PM
ဖြစ်ရမယ် ကဘွတ်နှယ် ... ဒါ့ပုံက ဘယ်လိုမကောင်းတဲ့ဒါ့ပုံယူသွားလဲမှမသိတာ။ ကျွန်တော်သွားလဲတုန်းကတော့ ကိုယ်ယူသွားတဲ့ ဒါ့ပုံနဲ့ပဲ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲ။ ပြန်ရိုက်စရာမလိုဘူး။
ငစနေ August 24, 2010 at 12:48 PM
@AMK ... ဘာ chip မှ မပါဘူးခင်ည။
ဓါတ်ပုံ page ရဲ့ အောက်ဆုံးလိုင်း၂လိုင်းက စက်နဲ့ ဖတ်လို့ရတဲ့ OCR code တွေ။ လေဆိပ်ကောင်တာမှာ စက်ပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ နာမည် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်(အဲလေ) passport no. တွေ ရိုက်ထည့်စရာမလိုပဲ ပေါ်လာအောင် လုပ်ပေးထားတာ။
Ko Boyz August 24, 2010 at 2:10 PM
With new policy effective on that day, everyone must retake photo with embassy's appointed so called photographer. This has to be done regardless of whether you provide them with yr own photo or not.